Inkawu yesine: isavenge sokuqala kuthotho lwe-4MK Thrillers | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | 03/09/2021 17:37 | I-Biography, Iincwadi, Inoveli emnyama
Isicatshulwa sikaJD Barker
Inkawu Yesine —Inkawu Yesine ngesiNgesi-yinoveli yesibini yombhali waseMelika uJD Barker. Ipapashwe ngoJuni 2017, sisiqalo sokuqala sothotho lwe-4MK Thrillers, ethe yamkelwa kakuhle luluntu kunye nabagxeki. Kananjalo, ngaloo nyaka le ncwadi yafumana amawonga e-Apple E-Book kudidi lwe- "Ukubalasela kuShicilelo oluZimeleyo" kunye ne-Audie yesona sigxina sithandekayo.
Ngelo xesha, uBarker wayesele esaziwa njengomdali wolwaphulo-mthetho, owoyikisayo kunye namabali obuxoki ayila Ishiywe (2014), inoveli yakhe yokuqala. Inyaniso, amalungelo emiboniso bhanyabhanya kunye nomabonakude Inkawu yesine Zathengiswa phantse unyaka ngaphambi kokuba incwadi ikhutshwe kwiParamount Pictures nakwi-CBS, ngokulandelanayo.
1 Isishwankathelo seSine Monkey
2.1 I-Classic kunye neyokuqala
3.1 Ubuntwana, ixesha lokufikisa kunye nezifundo
3.3 Ukuqala njengombhali
3.4 Ukungcwaliswa koncwadi
4 Izithuba zikaJD Barker
4.1 Amabali amafutshane
4.2.2 Uthotho lwee-4MK zoThotho
4.2.3 Iinoveli zisebenzisana noJames Patterson
4.2.4 Ezinye iinoveli
Isishwankathelo se Inkawu yesine
Isihloko sencwadi sibhekisa kwikhowudi yokuziphatha yaseTshayina yeenkawu ezintathu ezilumkileyo: ungaboni bubi, musa ukuva ububi, ungenzi okubi. Ngesi sizathu, kwiphepha lokuqala ukulandelelana kweziganeko kulindelwe, kuqhutyelwa kwisingqi somntu ogula ngokwenene, onobundlobongela kunye nengqondo yokuyila. Kule ndawo umbuzo ongundoqo ngowokuba ngubani okanye yintoni inkawu yesine?
Umbulali obulalayo ngumdlalo owenzelwe ukubonisa ukongama kwakhe kwengqondo. Sisiseko semfumba eyilelwe amapolisa kuphela esiphela nethuba lokusindisa ixhoba elilandelayo.. Kodwa, kwasekuqaleni umbulali uqala inyathelo elinye phambi kwabatshutshisi bakhe ... Nangona sele efile, kunokubakho elinye ixhoba.
Inkawu yesine (Áncora & ...
Iminyaka emihlanu, umbulali obulalayo obizwa ngokuba "yiMonkey yesine" ngabemi baseChicago ugrogrise abemi bayo. Xa umzimba wakhe ufunyanwa, amapolisa ngokukhawuleza aqaphela imeko yoxinzelelo. Kuyabonakala, ulwaphulo-mthetho lwaluzama ukubathumela umyalezo wokugqibela: kukho elinye ixhoba elisenokuba lisaphila.
Ngenxa yoko, umcuphi Sam umthwali -Inkokeli yeqela elikhethekileyo le-4MK- intuit ukuba, nangona ufile, Izicwangciso zobugebenga zombulali zisekude ukuba ziphele. Le mvakalelo iqinisekisiwe emva kokufunyanwa kwidayari kwenye yeepokethi zebhatyi ye-psychopath.
Njengoko ufunda imigca ekhohlakeleyo ebhalwe yinkawu yesine, U-Porter uyaqonda ukuba sele sele ebambekile engenathemba ngaphakathi kwesiqwenga sengqondo. Ukongeza, imeko yokubola komzimba yenza kube nzima ukufumanisa ukuba ngubani umbulali, ke ngoko, kunzima ngakumbi ukufumana indawo ekuyo ixhoba. Ukwenza izinto zibe mbi nangakumbi, amapolisa anexesha elincinci lokugcina idama.
I-Classic kunye neyokuqala
Umsonto obalisayo we Inkawu yesine Ikhupha iimvakalelo eziveliswe yiklasikhi enkulu yokurhanelwa okwangoku (njenge Ukuthula kwamatakane o Sixhengxe, njengokuba). Nangona kunjalo, ukuphuhliswa kwencwadi kubaluleke kakhulu. Okokuqala, akukho nto injengomcuphi oqhelekileyo ekusukeleni umbulaliKuba okokugqibela kudlule kwangaphambili.
Kwangokunjalo, imbali ibandakanya onke amacandelo abalulekileyo into evuyisayo elungileyo-Imidlalo yengqondo entsonkothileyo, ibhinqa eliselula elisengozini yokufa, uxinzelelo olusisigxina kunye neqhinga elibi. Ukongeza, kwidayari yokubulala ibonisa inguquko yokwenyani ukusuka ebuntwaneni obubonakala buqhelekileyo kude kube mdala umntu ojijekileyo.
Uninzi lwentlawulo esezantsi ephunyezwe nguJD Barker kwi Inkawu yesine ivela kwimpembelelo yeenkcazo zabo. Inyaniso, Iinkcukacha ze-eschatological zihlala zibakho ebalini, ngenxa yoko, Ayisiyo ukufunda okucetyiswayo kuzo zonke iintlobo zabantu. Iziphumo zibe libali elinamandla, elimnyama neliphazamisayo kubafundi abanovakalelo.
Ngokuhambelana Isitayile sokubalisa amabali sikaBarker sibonelela kakhulu kwaye sonwabisa izakhelo zebhanyabhanya kubathandi bemincili. Ngenxa yezi zizathu, uninzi lokugxekwa kuncwadi lilinganisile Inkawu yesine njengencwadi eguqukayo, eyonwabisayo kunye nomlutha.
Ubuntwana, ixesha lokufikisa kunye nezifundo
UJonathan Dylan Barker wazalwa ngoJanuwari 7, 1971 eLombard, eIllinois, eUnited States. Wahlala bonke ubuntwana bakhe kwilizwe lakhe kwada kwango-1985 wafuduka nosapho waya e-Englewood, eFlorida. Pha, Ufumene isidanga samabanga aphakamileyo eLemon Bay High School (1989). Emva kwexesha, wabhalisa kwiZiko lobuGcisa laseFort Lauderdale ukuze afundele ukulawulwa kweshishini.
Barker umsebenzi ngesandla sikaPaul Gallota kwiphephancwadi Ngama-25 ngokufanayo Ngexesha lakhe njengomfundi waseyunivesithi. Kwelo phephancwadi wayenomntu osebenza naye ngokusondeleyo kunye noBrian Hugh Warner (owathi kamva waduma kwihlabathi phantsi kwegama lika UMarilyn Mason). Phakathi kwezona zabelo zakhe zibalaseleyo kudliwanondlebe namaqela afana neshumi elinesixhenxe okanye iTeenBeat.
Kwi 1992, UBarker waqala ukubonisa iziphumo zophando lwakhe ezinxulumene neziganeko eziqhelekileyo kwi kutyhilwa, ikholamu encinci yephephandaba. Ngokunxibelelana, wathabatha amanyathelo akhe okuqala njenge Isiporho (ghostwriter) ngelixa unceda abanye ababhali abasakhasayo ngoshicilelo lwabo.
Kwiwebhusayithi esemthethweni yombhali wase-Illinois, kubonakala ngathi UStephen King wamgunyazisa ukuba asebenzise isimilo sikaLeland Gaunt (yenoveli Izinto eziyimfuneko) emva kokufunda isiqwenga se uhlelo lokuqala Ishiywe. Ukongeza, inoveli yokuqala kaBarker yaba yenye yezona zinto zathengiswa kakhulu eAmazon kwaye wachongwa ukuba afumane amabhaso aliqela kwilizwe lokupapasha.
Ngaphandle kukaKumkani, UBarker ukhankanye uNeil Gaiman, uDean Koontz noJohn Saul phakathi kweempembelelo zakhe zoncwadi.. Okwangoku, lo mbhali waseMelika yenye yezona zidumileyo kwilizwe lakhe ngaphakathi kweentlobo zemfihlakalo, ezoyikisayo, amabali esayensi kunye namabali aqhelekileyo. Ngokuqinisekileyo, olu lutyekelo oluphuhliswe ngumbhali kwasebusaneni kwaye lusetyenziswa kwimibhalo yakhe.
Kule nkalo, inqaku elilandelayo liyavela kwiwebhusayithi esemthethweni yeBarker: “Ukuphumla kuze kuphela emva kokujonga phantsi kwebhedi yam kabini emva koko ndazifaka phantsi kokhuseleko lwamashiti am (ekungekho monster inokungena kuwo), ndivale intloko yam ngokuqinileyo. Akazange aye ezantsi kwigumbi elingaphantsi. Ungaze ".
Izithuba zikaJD Barker
Iindlela ezingendawo (1997)
Umdlalo womntu ofowunayo (1997)
Uthotho lwee-4MK zoThotho
Inkawu yesine (2017)
Umntwana weSithandathu ongendawo (2019).
Iinoveli zisebenzisana noJames Patterson
Unxweme ukuya kuNxweme (2020)
Dracul (umbhali-mbhali kunye noDacre Stoker - 2018)
Unento Eyaphukileyo Apho Intliziyo Yakhe Ifanele Ukuba Khona (2020)
Umdlalo womntu ofowunayo (2021).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » Inkawu yesine
Iiponti zikaMarta Gracia. Udliwanondlebe nomlobi wohambo lwenamba